CNDF, CDF, PDF (Kalay) Pawl Komaw In Ralkap Pawl An Donak Ah Ralkap Lam Mithi An Tam – Meifar
CNDF, CDF, PDF (Kalay) Pawl Komaw In Ralkap Pawl An Donak Ah Ralkap Lam Mithi An Tam
August 19, 2021 admin Lawrkhawm 0
(1). 2021 July ni (1) ah SAC Ralkap pawl in Chin Ramkulh, Falam Peng sungah Hriamhreipi pawl thawn an kapih, CNDF leaṭuanpi PDF (Kalay) kom-aw in, mah le mah kilhim-awknak ah kan rak kap ih SAC Ralkap lam ihsin mi (4) an thiasi.
(2). July ni (21) ihsin ni (29) tiang ni-8 sung, Falam-Hakha lamzinpi parah SAC Ralkap pawl in Hriamhreipi le hriamhrei dangdang pawl thawn nasa takin an kap ih, CNDF le kan ṭuanpi Pengdang CDF pawl thawn komaw in, mah le mah kilhimawknak ah kan rak kap ih SAC Ralkap lam ihsin mi (15) kiangkap thi in, mi (20) leng hriamhma an ngah.
(3). Kan Lairawn ah, July thla sungih Do-Nwe kahawknak le August thla sungih Kalay peng thlanglam kah-awknak pawl ah kan ṭuanpi PDF (Kalay) le CNDF kom-aw in kan kap tlangasi.
(4). August ni (1) ihsin ni (15) sungah Falam peng sungih Falam-Hakha lamzinpi ah SAC Ralkap pawl in Hriamhreipi le hriamhrei dangdang thawn an kap salih, CNDF le Pengdang CDF pawl komaw in kan rak kapih, SAC Ralkap mi (20) hrawng an thi ding tiah zumasiih, mi (10) luan hriamhma an ngah. Cui’ kahawknak ah Drone pakhat kan kap thlaasi.
Tui ṭum kah-awknak pawl ah CNDF le kan ṭuanpi: PDF (Kalay) le Pengdang CDF ihsin hriamhma ngah zohman kan um lo.
၁။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁) ရက်နေ့တွင် စကစတပ်မှ ချင်းပြည်နယ်၊ ဖလမ်းမြို့နယ်အတွင်း လက်နက်ကြီးများဖြင့် ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့သဖြင့် CNDF နှင့် မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်သော PDF (Kalay) မှ ပြန်လည်ခုခံ တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ စကစတပ်မှ (၄) ဦး သေဆုံးခဲ့သည်။
၂။ ဇူလိုင်လ (၂၁) ရက် မှ (၂၉) ရက်အထိ (၈) ရက်အတွင်း ဖလမ်းမြို့နယ်ရှိ ဖလမ်း-ဟားခါး လမ်းမပေါ်တွင် စကစတပ်မှ လက်နက်ကြီး၊ လက်နက်ငယ်များဖြင့် ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရာ CNDF နှင့် မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များဖြစ်သော အခြားမြို့နယ် CDF အဖွဲ့များမှ ပြန်လည်ခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ စကစဘက်မှ (၁၅) ဦးခန့် သေဆုံးပြီး (၂၀) ကျော် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသည်။
၃။ ကလေးမြို့နယ်အတွင်း ဇူလိုင်လတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဒိုးနွယ်တိုက်ပွဲနှင့် ဩဂုတ်လတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ကလေးမြို့ တောင်ပိုင်းတိုက်ပွဲများတွင်လည်း မဟာမိတ် PDF (Kalay) နှင့်အတူ CNDF မှ ပူးပေါင်း တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။
၄။ သြဂုတ်လ (၁) ရက်နေ့မှ (၁၅) ရက်အတွင်း ဖလမ်းမြို့နယ်ရှိ ဖလမ်း-ဟားခါး လမ်းမတွင် စကစတပ်မှ လက်နက်ကြီး၊ လက်နက်ငယ်များဖြင့် ထပ်မံပစ်ခတ်ခဲ့ရာ CNDF နှင့် အခြားမြို့နယ် CDF အဖွဲ့များမှ ပြန်လည်ခုခံတိုက်ခိုက်ရာ စကစဘက်မှ အယောက် (၂၀) နီးပါး သေဆုံးမည်ဟု ခန့်မှန်းရပြီး (၁၀) ဦး ကျော် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသည်။ ၎င်းတိုက်ပွဲများတွင် အသေးစားဒရုန်းတစ်စင်းအား ပစ်ချဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့သည်။
အဆိုပါတိုက်ပွဲများတွင် CNDF နှင့်အတူ မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များဖြစ်သော PDF (Kalay) နှင့် အခြားမြို့နယ် CDF များမှ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှု မရှိခဲ့ပါ။ သတင်းပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဌာနချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်
Assam Police In Mizo An Kap
Ralkap In An Hrem Nasa Tuk Ruangah A Lu Le Mit Ihsin Thisen A Suak, A Taksa Pumpi Ah Hliamhma A Tuar